Fahefana fizahantany ao Hawaii: nandany 12.3% ny mpitsidika any Hawaii
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Fahefana fizahantany ao Hawaii: nandany 12.3% ny mpitsidika any Hawaii
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • fampiasam-bola • Vaovao • People • fiantsenana • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao
George D. Szigeti, filoha sady CEO an'ny Hawaii Tourism Authority (HTA), dia namoaka izao fanambarana manaraka izao momba ny antontan'isa momba ny mpitsidika an'i Hawaii tamin'ny martsa 2017.
“Ny indostrian'ny fizahan-tany any Hawaii dia nanala ny ampahefa-potoana voalohany nahitana vokatra miavaka tamin'ny volana martsa. Ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika dia nitombo 12.3 isan-jato tamin'ny volana martsa, ny fiakarana avo indrindra isam-bolana ny indostria nanomboka ny volana desambra 2012. Raha jerena fa ny fizahan-tany Hawaii dia niaina dimy taona naninjitra firaketana ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika, dia volana tena niavaka tokoa ny volana martsa ary famantarana ny Hawaii Nosy dia mitohy ho toerana ankafizin'ny mpandeha an-tany.
“Mandritra ny telovolana voalohany, ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika any Hawaii dia mialoha ny hafaingan'ny taon-dasa hatramin'ny 10.4 isan-jato, na mihoatra ny $ 412 tapitrisa, izay mitentina $ 4.4 miliara. Vokatr'izany dia 511.3 tapitrisa dolara ny vola azon'ny hetra ho an'ny State of Hawaii, fiakarana salama 48.2 tapitrisa dolara tamin'ny taona lasa.
“Ny amerikana an-tanety dia mitohy ny tsenantsika matanjaka indrindra ary nitombo tsara i Canada, saingy ny fitsanganan'i Japon indray no zava-dehibe tamin'ny telovolana voalohany. Ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika sy ny fahatongavan'i Japon dia niakatra 19.1 isan-jato ary 7.3 isan-jato, ny taha ambony indrindra amin'ny fitomboan'ny tsena lehibe ao Hawaii.
“Ny telovolana voalohany dia nihoatra ny nantenaintsika ho an'ny indostrian'ny fizahantany any Hawaii ary manantena izahay fa hitohy hatrany izany fotoana izany amin'ny volana ho avy. Misaotra ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria izahay amin'ny zavatra rehetra ataon'izy ireo mba hitazomana ny marika Hawaii hatanjaka sy hahafinaritra ny mpitsidika anay. Mafana sy tsy miovaova ny fifaninanana eo amin'ny toeran-kaleha manintona ny mpitsangatsangana. Na eo aza ny fahombiazan'ny valin'ny telovolana voalohany, dia ilaina hatrany ny fiaraha-miasa eo amin'ireo mpiray antoka amin'ny fanohanana ny indostria lehibe indrindra eto amin'ny fanjakana satria mikatsaka ny anjarany amin'ny tsena fitetezana eran-tany i Hawaii. ”